Santo Rosario Lwesibini Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Yazi Zintoni iimfihlelo ze Ingcwele yeRosari Lwe sibini? lonto kufuneka ixelwe kuphela kwezi ntsuku okanye kwangooLwezihlanu. Ukongeza koku, yazi imithandazo ebonisiweyo yokwenza ezi mfihlakalo zaziwa ngokuba buhlungu.
1 Ingcwele yeRosari ngoLwesibini kunye neemfihlakalo eziLusizi
2 Bafanele bathandaze nini?
3 Ziyintoni na?
3.1 Imfihlakalo yokuqala: Umthandazo egadini
3.2 Imfihlelo yesiBini: Ukuqaqanjiswa kukaYesu
3.3 Imfihlakalo yesithathu: Ukuthwesa isithsaba ngameva
3.4 Imfihlakalo yesine: UYesu uhamba nomnqamlezo
3.5 Imfihlakalo yesihlanu: UYesu uyafa emnqamlezweni
4 Ithini imithandazo ekufuneka yenziwe kwiiMfihlakalo eziLusizi?
5 Ngawaphi amanyathelo oza kuwalandela ukuthandaza iRosari?
6 Uyintoni umthandazo weNtombi Enyulu kaFatima?
6.1 Yintoni onokuyibuza ngeNtombikazi yeFatima?
Ingcwele yeRosari ngoLwesibini kunye neemfihlakalo eziLusizi
Kucacisiwe ukuba iimfihlakalo eziLusizi zezo kanye apho kubaliswa ngazo zonke iintlungu ezazifunyanwa yiNtombikazi kaMariya kunye noYesu Krestu. Kwimfihlelo nganye kwezi zihlanu ezithe zaqhekeka kuye, kunokuqwalaselwa indlela uYesu ahamba ngayo emnqamlezweni, indlela awafa ngayo wabuya wavuka kwakhona.
Injongo yezi mfihlakalo kukuzisa amakholwa kuwo onke la maxesha abuhlungu ekuye kwafuneka badlule kuwo, kuphela ukusinika inkululeko, uxolo, uthando kunye nokusinika iNceba yakhe eNgcwele ngamaxesha onke.
Bafanele bathandaze nini?
Kuye kwasungulwa ngeCawa yamaKatolika ukuba iimfihlakalo ezibuhlungu mazithandazelwe kwaye zihlangane kuphela ngoLwesibili nangoLwesihlanu. Ngaphandle koku, iCawe ayizimiselanga kubeka nasiphi na isithintelo kumakholwa, kodwa ifuna kuphela umzuzu ofanelekileyo wokuyifunda.
Ngeli xesha nganye yeziMfihlakalo eziLusizi ezintlanu zeRosari eNgcwele ziyakukhankanywa kwaye zidweliswe, ukongeza kuloo nto, uya kuba nakho ukufumana isishwankathelo esincinci nesichanekileyo sazo ukuze ujonge kwimbali epasiswe yiNkosi yethu.
Umthandazo egadini (Marko 12, 32 - 42).
Ukuhlanjululwa kukaYesu (uMateyu 27, 11-26).
Ukuthotywa ngameva (Marko 15, 15-20).
UYesu uhamba nomnqamlezo (Yohane 19, 6-17).
UYesu uyafa emnqamlezweni (Matewu 27, 33-50).
Imfihlelo yokuqala: Umthandazo egadini
UYesu waxelela abafundi bakhe oku kulandelayo: "Hlala apha, ndiza kuthandaza". Emva koko, uJuan, uPedro noSantiago bathathwa kunye naye wathi: "Ndiziva ndibuhlungu, ngokungathi umphefumlo wam uyafa, hlala apha nam."
Imfihlelo yesiBini: Ukuqaqanjiswa kukaYesu
Ngesi sihlandlo, uYesu waya kwirhuluneli wambuza lo mbuzo ulandelayo: Unguye na uKumkani wamaYuda?. Waphendula kwangoko: "Utsho". Ke kaloku, ngalo elo mzuzu irhuluneli yakhululela elinye lamabanjwa ebeyinaye, egama linguBharabhas. Akuwenza oko, wamthabatha uYesu, wamtyakatya, bada bemka naye, ukuze bambethelele emnqamlezweni; UMesiya.
Imfihlakalo yesithathu: Ukuthwesa isithsaba ngameva
Kwimfihlakalo yesithathu, amajoni amnxibisa uYesu ingubo emfusa, amthwesa isithsaba sameva, aqala ukumbetha xa ehamba ethwele umnqamlezo.
Imfihlakalo yesine: UYesu uhamba nomnqamlezo
UPilato nguye owakhokelela ukuba uYesu abethelelwe emnqamlezweni.
Imfihlakalo yesihlanu: UYesu uyafa emnqamlezweni
Akufika kuKhakhayi, kwindawo apho babezimisele ukumbethela khona, bamnika iwayini ukuba asele, kodwa akayithatha. Baza bakhulula iingubo zakhe ezimsobo, babela elinye kuwo amajoni. Emva koko, bahlala bonke bemgadile. Abantu abaninzi babemthuka bemcenga besithi akanguye unyana kaThixo.
Ithini imithandazo ekufuneka yenziwe kwiiMfihlakalo eziLusizi?
Imithandazo ekufuneka yenziwe ukuze uqale amabali eemfihlakalo eziSizi yile ichazwe ngezantsi:
3 Iintaka uMaria.
Qaphela: Kubalulekile ukuqaqambisa ukuba esiphelweni semfihlakalo nganye nganye, le mithandazo mayifundwe ukuze iqhubeke nezinye iimfihlakalo ezihambelanayo zeRosari eNgcwele.
Ukuba uyayithanda iposti yethu malunga «neRosari eNgcwele ngoLwesibini». Sikucebisa ukuba undwendwele kwaye ufunde de kube sekupheleni inqaku elilandelayo elikhankanyiweyo elinokuba ngumdla omkhulu IRosari yenceba kaThixo.
Ngawaphi amanyathelo oza kuwalandela ukuthandaza iRosari?
Ukuze ukwazi ukuthandaza irosari ngendlela echanekileyo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo uthotho lwamanyathelo kwaye oku kuya kuchazwa ngezantsi:
Yenza uphawu loMnqamlezo oyiNgcwele kwaye uqhubeke uthandaze iSivumo Sokholo Sabapostile.
Thandaza abathathu (3) Yibonge uMariya.
Yazisa imfihlelo yokuqala ehambelana nayo kwaye uthi nguBawo Wethu.
Emva koko, kuya kufuneka uthandaze ishumi (10) Thobela uMariya emva koko udlulele kwimfihlakalo elandelayo.
Kuya kufuneka uthandaze iGloria kwaye, kunye nomthandazo weNtombi Enyulu kaFatima.
Ubhengeza imfihlelo yesibini, emva koko aqhubeke nokuthandaza kuBawo wethu.
Phinda inyathelo lesithandathu (6) kunye nenombolo yenyathelo (7) ngalo lonke ixesha uza kugqiba kwaye uqale imfihlakalo.
Gqibezela ngokuthandaza iSalve uze wenze umthandazo emva kokuba ugqibile.
Uyintoni umthandazo weNtombi Enyulu kaFatima?
Umthandazo weNtombi Enyulu kaFatima ulula kakhulu, kodwa kwangaxeshanye kubalulekile ukufikelela encotsheni ngemithandazo yeYona Ngcwele kunye neRosari eNgcwele. Esi sigwebo sinje:
Owu Yesu wam, usixolele izono zethu!
Sihlangule emlilweni wesihogo.
Thatha yonke imiphefumlo uyise ezulwini,
ngakumbi kwabo badinga inceba yakho. Amen ".
Yintoni onokuyibuza ngeNtombikazi yeFatima?
Intombi enyulu kaFatima ingacelwa kwaye kuthandazelwe abantwana abasweleyo, abagulayo kunye nabo basokolayo. Ukongeza, inokucelwa uxolo lwehlabathi liphela. Intombi eyiFatima yaziwa ngokuba yiLady yethu yeRosari, nangona umahluko wamagama unikwe enye yeentombi, iVirima yeFatima yona iyintombi enguMariya, kodwa iyahlonitshwa ngeli gama elinye. Ukunikezelwa.
Kwelinye icala, sinokuthi siqwalasele inani elikhulu lemithandazo esele ikho yokunqula, nokuba kungoku igama okanye elinye. Nangona kunjalo, apha siza kukhankanya omnye wemithandazo yakhe emnandi ukuze uwafunde xa ufuna.
“Oyena Thixo uyiNgcwele, uYise, Nyana noMoya oyiNgcwele, ndiyanithanda kakhulu kwaye ndininika ngalomhla umzimba, igazi, umphefumlo nobuthixo beNkosi yethu, nina nikhoyo kuyo yonke iTabernakele lehlabathi, nilungisa umonakalo owenziwe ngaboni. Ngenxa yobukhulu bakho obungenasiphelo seNtliziyo Engcwele kaYesu, sikucela ngokuqinileyo ukuguquka kwabo bonke aboni ”.